विभिन्न रोगमा प्रयोग हुने मदर टिन्चरबारे महत्वपुर्ण जानकारी Nepalpatra विभिन्न रोगमा प्रयोग हुने मदर टिन्चरबारे महत्वपुर्ण जानकारी
विभिन्न रोगमा प्रयोग हुने मदर टिन्चरबारे महत्वपुर्ण जानकारी
होम्योपैथीक औषधिमा मदर टिन्चर महत्वपुर्ण औषधिको रूपम लिएको छ । यस्ता मदर टिन्चर सिङ्गल जडिबुटीबाट बनाइएका छन् ।‌ यस्ता जडिबुटी नेपालमा प्रशस्त भएकाले होम्योपैथीक औषधि तयार गर्न सके एलोपैथिक भन्दा पनि राम्रो परिणाम देखिन सक्छ ।
नेपालमा सीमित होम्योपैथीक डाक्टर भएका र मदर टिन्चर भन्दा डायुलेसन र वायोकेमिकबाट उपचार गर्ने भएकाले यस्ता लेख कम आउने गरेका छन् । होम्योपैथीक औषधि सेफ हुँदाहुँदै गर्दा पनि मदर टिन्चर सम्बन्धि पुस्तकको अभाव खटिएको छ ।
म “अखिल नेपाल होम्योपैथीक एसोसिएसन “को आजीवन सदस्य भएकाले यसको विकास नेपालमा होस् भन्न चाहन्छु । नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रमा जडिबुटी त्यसै खेर गएको हुनाले यस्ता जडिबुटी सदुपयोग गर्दै होम्योपैथीक औषधिको विकास नेपालमा भएमा बेरोजगार मेट्न र खेर गएका जडिबुटी पनि प्रयोग हुने जनता निरोगी हुने प्रयाप्त सम्भावना देखिएको छ ।
होम्योपैथीक औषधि शुद्ध जडिबुटीबाट बन्ने भएकाले साइड इफेक्ट समेत नहुने देखिन्छ । यस्ता औषधि उत्पादन गर्ने जिम्मा सरकारले लिन सके देशको उन्नति निश्चित देखिन्छ । आजको यो लेखमा मैले केहि मदर टिन्चरबाट सन्चो हुन सक्ने औषधिबारे जानकारी पस्कनेछु ।
केहि रोगहरूमा मदर टिन्चरको प्रयोग यस्तो छ
१. अशोका मदर टिन्चर
अशोका मदर टिन्चर यो औषधि अशोकको बोक्रा पात फलबाट बनाईएको छ । महिलाको मासिक धर्म सम्न्धित सम्पुर्ण रोग यो औषधिको सेवनले निको बनाउदछ ।
मात्रा : १५ थोपा थोरै पानीमा राखेर दिनमा ३ पटक खाने ।
२. मिलिफोलिएम मदर टिन्चर
यो पनि जस्तो सुकै रक्तस्राव रोक्न बेजोड छ । जडिबुटीबाटै बनेको छ । Feminine5mg,Tranexamic Acid 500mg को टेब्लेट भन्दा छिटो काम गर्छ ।
मात्रा : १५ थोपा थोरै पानीमा राखेर दिनमा ३ पटक खाने
३. कार्डुअस मरयानस
लिभर सम्बन्धित सम्पुर्ण रोगमा उपयोगी छ ।
मात्रा : १० देखि १५ थोपा थोरै पानीमा राखेर दिनमा ३ पटक खाने ।
यो औषधिको प्रयोग गर्नाले लहरे खोकी (Whooping Cough) मा राम्रो फाइदा गर्दछ ।
मात्रा : ५,१० थोपासम्म रोगको अवस्था हेरेर थोरै पानीमा राखेर दिनमा ३ पटक खान दिने ।
५. बरबेरिस बल्गेरिस
यो औषधिले पित्त थैली र किड्नी स्टोनमा राम्रो फाइदा गर्दछ । हामीले हजारौं पेसेण्टको पत्थरी फाल्न सफल भएका छौं ।
मात्रा :१५ थोपा थोरै पानीमा राखेर दिनमा ३ पटक खाने ।
टुटेको हड्डी जोड्न वेजोड औषधि छ । यसको साहेताबाट हड्डी जोड्न सफल भुमिका निभाउन सकिने छ । यो खान र दल्न सकिन्छ ।
मात्रा : ५ देखि १० थोपा थोरै पानीमा राखेर दिनमा ३ पटक खाने चोट लागेको थाउमा दल्ने ।
७. गिलोय टिन्चर
मलेरिया र पुराना क्रोनिक रोगमा समेत राम्रो फाइदा गर्दछ ।
८. टिन्चर निम
चर्म रोग र मलेरियाको सफल औषधि । जस्तो सुकै घाउ खटिरा निको बनाउन समेत सफल छ ।
मात्रा : ५/७ थोपा थोरै पानीमा राखेर दिनमा ३ पटक खाने ।
यो औषधिले क्यान्सरको रोगमा सफल उपचार हुन्छ । क्यान्सरको पिडामा समेत राहत दिन्छ ।
मात्रा : १० थोपा थोरै पानीमा राखेर दिनमा ३ पटक खाने ।
यो औषधि शरीर सुन्निएको, पेटमा पानी भरिएकोमा उपयोगी छ ।
मात्रा : १५ थोपा थोरै पानीमा राखेर दिनमा ३ पटक खान दिने ।
नोट : यो मदर टिन्चर उमेर र अवस्था हेरेर ५ देखि १५ थोपासम्म दिनमा २ वा ३ पटक पानीमा मिलाएर दिन सकिनेछ । यो औषधि होम्योपैथीक फार्मेसिमा उपलब्ध छन् डाक्टरको परामर्शमा औषधि सेवन गराउदा धेरै राम्रो हुनेछ ।
तुलसी र मानव स्वास्थ्य वारेमा एक उपयोगी जानकारी
देशभर थप ६६६ जनामा कोरोना पुष्टि, ११ जनाको मृत्यु
देशभर थप ७७६ जनामा कोरोना पुष्टि, १३ जनाको मृत्यु